Kitchen Stories - Recipes & Cooking APK Download for Android
ပင်မစာမျက်နှာ » ဟင်းချက် Apps ကပ » မီးဖိုချောင်ပုံပြင်များ - ချက်ပြုတ်နည်း & ဟင်းချက်
မီးဖိုချောင်ပုံပြင်များ - ချက်ပြုတ်နည်း & ဟင်းချက် APK ကို
ကမ္ဘာတဝှမ်းသုံးစွဲသူသန်းပေါင်းများစွာပြီးသားမီးဖိုချောင်ပုံပြင်, Google Play ရဲ့ဒီဇိုင်းဆု-အခုသင့်ရဲ့အလှည့်ဖွင့်များ၏ဆုရှင်နှင့်အတူချက်ပြုတ်ကြသည်! အခမဲ့ချက်ပြုတ်နည်းများ, HD ကိုသင်ကြားပို့ချဗွီဒီယိုများနှင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်ဖုတ်အကြောင်းကိုဆောင်းပါးများထောင်ပေါင်းများစွာ၏အားဖြင့်မှုတ်သွင်းခံရဖို့ယခုက download လုပ်ပါ။ Plus အားအိမ်ချက်ပြုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူမျှဝေဖို့သင့်ကိုယ်ပိုင်ချက်ပြုတ်နည်းများထုတ်ဝေရန်။ ဒါဟာအသုံးပြုရလွယ်ကူမယ့်နှင့်ရောနှောအရင်ကဆိုရင်နှင့်ကျွမ်းကျင်သူများကမှအယူခံကြောင်းတွန်းလှန်ချက်ပြုတ်နည်းများအမျိုးမျိုးပေးထားပါတယ်။ ချက်ပြုတ်ရမှအသင့်ဖြစ်ပြီလား?
အဆိုပါမီးဖိုချောင်ပုံပြင်များ app ကိုပေါ်ဤအကြောင်းအင်္ဂါရပ်များကိုခံစားကြည့်ပါ:
✔သင်ကြားပို့ချဗီဒီယိုများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုလဲ tutorial နဲ့မီးဖိုချောင်လိုလားသူဖြစ်လာ
✔သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပရိုဖိုင်းကိုဖွင့် Set နှင့်စိတ်ကြိုက်ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်အတွက်သင်အကြိုက်ဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများကယ်တင်
ချက်ပြုတ်နည်းများမှတဆင့်မစိုက်ပဲ့ထိန်းခံရဖို့✔ Activate "ချက်ပြုတ် mode ကို" step-by-step
✔အလွယ်တကူအရွယ်အစားစားသုံးခြင်း်ထမ်းဆောင်သည်နှင့်အညီပါဝင်ပစ္စည်းတိုင်းတာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်တိုင်းတာခြင်း converter ကိုသုံးပါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်အင်္ဂါရပ်နှင့်တကွသင်ယခုမီးဖိုချောင်ပုံပြင်များ app ကိုရန်သင့်သည်အလွန်ကိုယ်ပိုင်ချက်ပြုတ်နည်းများထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့များမှာ! တစ်ခုချင်းစီကိုစာရွက်ခြေလှမ်းများ၏ရှင်းပြဓါတ်ပုံကိုယူနှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးဟင်းလျာများထပ်ဖွဘယ်လိုကတခြားအိမ်မှာတစ်ခါတလေစားဖိုမှူးပြသပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာဖွေရေးအင်္ဂါရပ်မှကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏အရသာနှင့်အာဟာရဦးစားပေးဘို့အပြီးပြည့်စုံသောစာရွက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အာမခံပါသည်။ ကျနော်တို့နေ့စဉ်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ရန်ဖြည့်တင်းရန်သက်သတ်လွတ်နှင့်အသက်သတ်လွတ်ဟင်းလျာများ၏အမျိုးမျိုးအဖြစ်အနိမ့်-carb, gluten-အခမဲ့နှင့်အနိမ့်ကယ်လိုရီ options များဆက်ကပ်။ မနက်စာကနေညစာစားရန်, သင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကြားရက်ညများအကြိုက်ဆုံး, ဂန္အပေါ်ရာသီအလိုက်ပွေီးမှ, နှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အရသာအပါအဝင်လူအစုအဝေး-နှချက်ပြုတ်နည်းများ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်ရေးအပေါ်ရေတွက်လို့ရပါတယ်။
သင်တစ်ဦးအစပြုသူသို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်နေပဲဖြစ်ဖြစ်, အယ်ဒီတာများနှင့်စားဖိုမှူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ကြားပို့ချ HD ကိုစာရွက်ဗီဒီယိုများနှင့်အကြံပေးချက်များထံမှသင်ယူဖို့အသစ်သောအရာတစ်ခုခုအမြဲရှိပါတယ်။ ချက်ပြုတ် mode ကိုအင်္ဂါရပ်ကိုသက်ဝင်နှင့်လွယ်ကူ-to-နားလည်နှင့်တကွသင်ပဲ့ပြင်ကြကုန်အံ့, step-by-step ဓါတ်ပုံများနှင့်ညွှန်ကြားချက်များကိုတစ်ဦးချင်းစီစာရွက်သည်။ နှင့်သင့်ပန်းကန်၏ဓာတ်ပုံ upload ကအဆင်သင့်ရဲ့တစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာလောင်မွတ်သိပ်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူမျှဝေဖို့မမေ့မလြော့ပါ!
ဒါကြောင့်နေ့စဉ်သငျသညျအပြီးင်သို့မဟုတ်ယနေ့အထူးအခါသမယဖြစ်ပါတယ်ချက်ပြုတ်ပါသလဲ? ဒီတစ်ခါလည်းသင်တစ်ယောက်တည်းအစာစားခြင်းသို့မဟုတ်တစ်ခုလုံးကိုမိသားစုများအတွက်ညစာအောင်နေ, တစ်ဦးအမြန်ရေစာလိုအပ်ပါတယ်သို့မဟုတ် appetizers နှင့်အချိုပွဲနဲ့သုံး-သင်တန်းမုန့်ညက်စီစဉ်ကူညီ? ငါတို့သည်သင်တို့ရရှိပါသည်: အခက်အခဲအဆင့်နှင့်ပြင်ဆင်မှုအချိန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချက်ပြုတ်နည်းများ Browse, ပေါင်းdအလိုရှိသောစားသုံးခြင်းအညီတိုင်းတာကိုထိန်းညှိဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာလေးကိုတိုင်းတာခြင်း converter ကိုသုံးပါ။ လွယ်ကူသောအဘို့, On-The-go စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, တစ်ခုတည်းကလစ်နှင့်သင်၏စျေးဝယ်စာရင်းထဲတွင်တစ်ဦးစာရွက်နေရာနှင့်သင့်သတိပေးချက်များသို့တိုက်ရိုက်ပေါင်းစပ်။
ကျနော်တို့ကအမြဲ ratings နှင့်တုံ့ပြန်ချက်မှပွင့်လင်းနေပါပြီ! hello@kitchenstories.de မှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူထိတွေ့ Get
သငျသညျ https://www.kitchenstories.com/en/terms/ မှာအသုံးပြုမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်များကိုရှာတှေ့နိုငျ
[+] app ကိုရန်သင့်ချက်ပြုတ်နည်းများ Upload လုပ်ပါနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအိမ်ပြန်ချက်ပြုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်း join ။
[+] အကြံပြုချက်ရှိပါသလား? ကျွန်တော်တို့ကို hello@kitchenstories.de မှာကြွေးကြော်သံပေးပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှနားထောငျခစျြတင့်!
[+] တစ်ဇီဝ, သင့်မွေးနေ့နှင့်ထို့ထက် ပို. နှင့်အတူသင်၏ပရိုဖိုင်ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်!
မီးဖိုချောင်ပုံပြင်များ - ချက်ပြုတ်နည်း & ဟင်းချက်
24.43 ကို MB